सिर्जना, कला र विचारको त्रिवेणी: क. रत्न बान्तवा हत्याको त्यो दिन
क. रत्न बान्तवा हत्याको त्यो दिन
२७ चैत ०३५ मा हत्या गरिएका नेकपा मालेका केन्द्रीय सदस्य रत्न बान्तवा त्यही दिन २७ वर्ष पुगेका थिए　। ०२८ को झापा आन्दोलनबाट प्रभावित भई क्रान्तिमा होमिएका बान्तवा क्रान्तिविना पञ्चायत ढाल्न सकिँदैन भन्दै राजनीतिक प्रशिक्षण दिँदै हिँड्थे　। त्यसैले, उनलाई पञ्चायतले धेरै दुःख दिएको थियो　। उनका आफन्त तथा नातागोतासमेत पञ्चायतबाट प्रताडित थिए　। बान्तवासँग अनुहार मिलेको निहुँमा पुलिसले उनका काकाका छोरा बम बान्तवा र छिमेकी निमा शेर्पालाई मारेको थियो　। वान्तवाको इलामको इभाङमा हत्या भएको थियो　। त्यस दिनलाई यसरी सम्भिmन्छिन् सुशीला श्रेष्ठ　। जो रत्न बान्तवासँग अन्तिम अवस्थामा सँगै थिइन्　।
रत्न बान्तवा, म र कल्पना (नीरमाया राई) एकाबिहानै हिँडयौँ　। हामी ताप्लेजुङ जाँदै थियौँ　। इलाममा एक परिचितको घर थियो　। उहाँ ज्योति दिदी भनेर चिनिनु हुन्थ्यो　। दुई-तीन दिनदेखि हामी इलामको इभाङ गाउँस्थित ज्योति दिदीकहाँ बसिरहेका थियौँ　। रत्न तीन महिनाअघि मात्रै नेकपा मालेको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए　। म र कल्पना पार्टीका कार्यकर्ता मात्र थियौँ　। हामी क्रान्तिका लागि निस्केका थियौँ　। पञ्चायती निरंकुश शासन ढाल्ने हाम्रो एकमात्र लक्ष्य थियो　।
त्यही दिन अर्थात् २७ चैतमा रत्न ठयाक्कै २७ वर्ष पुगेका थिए　। पार्टीले उनलाई ताप्लेजुङ खटायो　। त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनी कल्पना र मलाई साथ लिएर जन्म दिवसकै दिन ताप्लेजुङतिर जाँदै थियौँ　। प्रहरीको ठूलो डर थियो　। पञ्चायतविरोधीलाई जसरी पनि सखाप पार्ने सरकारी प्रपन्च थियो　। प्रहरी प्रशासन मरिमेटेर त्यसैमा लागिपरेको थियो　। पञ्चायतविरोधी, त्यसमा पनि कम्युनिस्टलाई त उनीहरू पुटेका आँखाले पनि देखिसहन्नथे　। भेटे त्यसै छाड्दैनन् भन्ने डर हाम्रो मनमा पनि कताकता थियो　। क्रान्ति गर्न भनेर हिँडिसकेपछि डरले केही गर्न सक्दोरहेनछ　। हामी निर्भयझैँ लगातार हिँडिरहेका थियौँ　। बिहान झिममिसेमै हिँडियो भने दुस्मनले हामीलाई चिन्ने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने सोच्यौँ　। त्यसैले सखारै बाटो ततायौँ　।
इभाङको पुछारमा एउटा कुइनेटो छ　। ज्योति दिदीको घरबाट निस्किएको आधा घन्टा पनि भएको थिएन, त्यही कुइनेटोमा मान्छे बोलेको गाइँगुइँ आवाज सुनियो　। गाउँले होलान्, काममा निस्केका भन्ठानेर हामी एकसुरमा हिँडिरहेका थियौँ　। अलिकति पर पुगेपछि नजिकै १०/१५ जनाको हुल देखियो　। राम्ररी उज्यालो भइसकेको थिएन　। ती पुलिस थिए या गाउँले भनेर ठम्याउन सकिएन　। यति भने प्रस्टै देखिन्थ्यो- उनीहरूका हातमा लामा-लामा बाँसका घारा (लठ्ठी) थिए　। त्यो देखेपछि भने हामी सशंकित भयौँ　।
त्यो हुल क्रमशः नजिकिँदै थियो　। हाम्रा नजिकै आइपुगेपछि हुलकै एकजनाले रत्नलाई चोरऔँलाले देखाउँदै भन्यो, 'रत्न बान्तवा भन्ने उही हो　।' उसले यति भन्नेबित्तिकै तीन/चारजनाले उनलाई समातिहाले　। यसो फर्केर हेरेको त हामीलाई दुस्मनले घेरामा पारिसकेको रहेछ　। हामी प्रहरीको घेराबीच थियौँ　। उनीहरूका हातमा बन्दुक, लठ्ठी, खुकुरी, खुर्पा आदि हतियार थिए　।
रत्न उनीहरूको नियन्त्रणबाट उम्किन प्रयत्न गरिरहेका थिए　। तर, उनलाई एकजना ठूलो ज्यान भएका व्यक्तिले बेस्कन अँठयाएर राखेको थियो　। उसको कसिलो पन्जामा रत्न उम्कने प्रयास गर्दै थिए, तर आफ्ना हात खोल्न सकिरहेका थिएनन्　। उनलाई काबुमा राख्न त्यो बलियो मान्छेलाई पनि कम्ती गाह्रो भने भइरहेको थिएन　।
त्यतिबेरसम्म उनीहरूले मलाई नियन्त्रणमा लिन भ्याइसकेका थिएनन्　। मौकाको सदुपयोग गर्न खोजेँ मैले　। त्यहीवेला लठ्ठीले रत्नलाई अँठयाउने मान्छेको हातमा बेस्सरी बजाइदिएँ　। ऊ पीडाले रन्थनियो र रत्नलाई छाड्न बाध्य भयो　। त्यसको नियन्त्रणबाट मुक्त भएर बान्तवा त्यहाँबाट भाग्न कोसिस गरिरहेका मात्र के थिए, डयाम्म आवाज आयो　। कसैले गोली चलाएछ, उनी त्यहीँ ढले　।
भाग्ने कोसिस गर्ना साथ मलाई पनि गोली हाने　। म पनि ढलेँ　। त्यसपछिका धेरै कुरा मलाई यादै भएन　। यतिसम्म याद छ, रत्न चलमलाइरहेका थिए　। सायद उनी पानी-पानी भन्दै अन्तिम सास लिइरहेका थिए　। दुस्मनलाई त्यसको के वास्ता ? निकै समयसम्म उनी छटपटाइरहेका थिए, कसैले पानी दिएनन्　।
मेरो झोलाबाट उनीहरूले सल झिके र उनको अचेत शरीर बाँधे　। त्यसको केही समयपछि उनको प्राण गइहाल्यो　। एक कुशल योद्धा, मेरा नेता रत्नको निधनले म झन् आत्तिएँ, स्वाभाविक रूपमा विचलित भएँ　।
गोली लागेर ढले पनि अलि-अलि होसचाहिँ थियो मलाई　। शरीरभरि रगतै-रगत लतपतिएको थियो　। उनकोे अन्तिम अवस्था टुलुटुलु हेर्नुबाहेक मसँग कुनै विकल्प थिएन　। आखिर केही गर्न सक्ने अवस्थामै कहाँ थिएँ र ? मनमा भने दुस्मनसँग बदलाको भयानक तुफान उठिरहेको थियो　। एक न एक दिन दुस्मनको यो क्रूरतालाई मुखभरिको जवाफ नफर्काइ छाड्ने छैन भन्ने अठोट गरिरहेकी थिएँ　।
साथी कल्पना भने कसरी-कसरी त्यहाँबाट उम्किन सफल भइछन्　। त्यसको दुई-चार दिनपछि मात्रै उनीसित भेट भयो　।
केही समयपछाडि उनीहरू त्यहाँबाट रत्नको लास बोकेर हिँडे　। मेरा दुवै हात मेरै सलले बाँधे र मलाई पनि सँगै लिएर निस्किए　। बाटोमा उनीहरू मलाई प्रश्न गर्थे- तिमी फलाना कि छोरी होइनौ ? म चुपचाप रहन्थे　। फेरि तिनैले अहिले तँ किन बोल्थिस् भनेर आफैँ जवाफ फर्काउँथे　। उनीहरू त्यो लास इलाम पुर्‍याउने भनेर त्यहाँबाट हिँडेका भए पनि बाटोमा आएपछि विचार बदलिएछ क्यारे, मंगलबारे पुग्ने भनिरहेका थिए　।
दुई-तीन घन्टा हिँडेपछि इभाङकै तल खोलानजिकैको गाउँ पुगियो　। बाटोमा लास राखेर उनीहरू तल घरको पर्खालनेर ओर्लिए　। त्यो घर गाउँको वडाध्यक्षको हो क्यारे　। उनीहरूले त्यहीँ भात खाने योजना बनाएका रहेछन्　। सबैले बन्दुक राखे, ड्रेस फुकाले र खाना खाने तर्खरमा जुटे　। मेरा हात खोलिएका थिए　। सोचेँ- सकेदेखि उम्किने उचित मौका यही हो　। नभन्दै त्यही मौका छोपेर भाग्न सफल भएँ　।
उनीहरू खानाकै तर्खरमा थिए, म खोल्साको छेउछेउ हुँदै गहिरो खोल्सा-पहरा भएर निस्किएँ　। थाहा पाएपछि उनीहरूले निकैबेरसम्म मेरो पिछा गरे　। केही नलागेर अन्ततः फायरिङ गर्न थाले　। त्यतिन्जेल म त्यहाँबाट उम्किसकेकाले तिनीहरूले भेट्टाउन सकेनन्　। चैतको सालघारीमा झरेका पात जब हावाको गतिले सर्‍याकसुरुक गर्थे, मेरो मुटुको गति दोब्बर हुन्थ्यो　। निकैबेरसम्म लखेट्दा पनि मलाई भेट्टाउन नसकेपछि उनीहरूले जंगलमा आगो लगाए　। म ज्यान जोगिने आशा मारेर सुरक्षित ठाउँको खोजीमा भौँतारिँदै थिएँ　। जंगलभरि चारैतिरबाट आगो दन्किन थाल्यो　। उनीहरूले हिँड्दै आगो सार्दै गरेको पनि मैले देखेँ　। कतै सुरक्षित स्थान नपाएपछि कतिवेला रूखको पोथ्राको सहारा लिन्थेँ त कहिले खोल्सामा जान्थेँ　। दुई घन्टापछि अलिकति सुरक्षित ठाउँ पुगेको महसुस भयो　। जंगलभित्रैको खाली ठाउँ पुगेकी थिएँ, त्यहाँ भने आगोले त्यति असर नपार्ने लाग्यो　। आगोको डर कम भए पनि दुस्मनले पछयाइरहेकाले असुरक्षित महसुस भइरहेको थियो　। त्यो पूरै दिन इभाङको त्यही जंगलभित्र बित्यो　। जंगलबीच म अलमलमा थिएँ　। कुन दिशातिर जाँदा, कहाँ पुगिन्छ भन्ने केही निश्चित थिएन　। खेदिएको मृगकै अवस्था थियो मेरो　।
चारैतिर आगो लगाएपछि उनीहरू निश्चिन्त भएछन्, म पक्का आगोले जलेर मरेँ　। त्यसपछि उनीहरू जंगल घेरा हालेर मेरो 'लास' खोज्न थालेछन्　। एकातिर आफ्नो आँखैअगाडि सहयोद्धा गुमाएको पीडा, अर्कोतिर दुस्मनको जालबाट कसरी उम्कने भन्ने चिन्ता, म शरीर र मन दुवैले लखतरान थिएँ　। पहिलोपटक पुगेको त्यस ठाउँका बारेमा मलाई धेरै थाहा भएन　। रत्नकै निर्देशनमा हिँडेका थियौँ हामी, तर बाटैमा निर्देशक गुमाउनुपरेको थियो　। तीनरात एक्लै जंगलै-जंगल हिँडेँ　। दिउँसो लुक्ने, रातभरि हिँड्ने गथेर्ँ　। झुप्राले त माया गर्छ होला भन्ने लागेर एउटा घरको ढोका ढकढक्याएँ　। भित्रबाट आवाज आयो- तँ त्यही भाग्ने केटी होइनस् ? पुलिसलाई खबर गरौँ कि यहाँबाट गइहाल्छेस्　। म आजित भएर हिँडेँ　। त्यो जंगलमा खाना त कहाँ पाउनू ? पानीले ज्यानसम्म बचायो　।
तीनरात हिँडेर ३० चैतमा पुनः त्यही घरमा पुग्न सफल भएँ　। ज्योति दिदीको घर, जहाँबाट हामी ताप्लेजुङका लागि निस्केका थियौँ　। ज्योतिका श्रीमान्ले त्यहाँ सधैँ पुलिस आइरहने भएकाले 'तपाईंलाई यहाँ सुरक्षा हुन्न,' भने　। त्यसपछि त्यहाँबाट पनि हिँडियो　। अब म एक्ली थिइनँ, त्यतिन्जेल मैले अन्य साथी पनि भेटिसकेकी थिएँ　।
उनीहरूले रत्नको लास इलाम लगेछन्　। दुई-तीन दिन राखेर 'पञ्चायतको विरोध गर्नेको यस्तै हविगत हुन्छ,' भन्दै इलामबजार घुमाएछन्　। केही दिनपछि लास गाडिदिएछन्　। घटनाबारे उनको परिवार भने अनभिज्ञ थियो　। उनको मृत्युबारे न पार्टीको पूर्वी कमान्डले खोजबिन गर्‍यो, न केन्द्रले नै हत्याबारे त्यति चासो दिएको पाइयो　। पञ्चायती बिगबिगी भएकाले पनि त्यतिवेला यकिन तथ्य बाहिर ल्याउन सकिएन　। तर, पछिल्लो समयमा अवस्था सहज भएर गए पनि त्यसतर्फ पार्टीको ध्यान पुगेको छैन　।
Ram Datta Panta
Posted by Narthunge at 6:41 AM